Kooxda Barcelona oo fariin laab qaboojin ah u dirtay xiddigeeda reer Brazil ee Philippe Coutinho – Gool FM
(Spain) 15 Luulyo 2019. Xoghayaha farsamada ee Barcelona Eric Abidal ayaa u diray farriin uu laabta ugu qaboojinayo xiddiga reer Brazil ee Philippe Coutinho, taasoo quseysa mustaqbalkiisa kooxda reer Catalonia.
Kaddib markii uu Antoine Griezmann ku biiray kooxda Barcelona, iyo hadal heynta ah inay xiiseenayaan adeega Neymar Jr, ayaa waxay ka dhigtay inay soo baxaan warar badan ee tibaaxaya suurtogalnimada uu Philippe Coutinho kaga dhaqaaqi karo garoonka Camp Nou.
Philippe Coutinho oo dhawaan kula soo guuleystay xulkiisa qaranka Brazil Copa America 2019, ayaa ka mid ah ciyaartoyda ugu cadcad ee ka dhaqaaqi karta kooxda Barcelona, waxaana ku wehliya arrintan xiddigaha kale Samuel Umtiti, Malcom iyo Rafael Alcántara.
Hadaba halyeeyga kooxda Barcelona ee Eric Abidal oo kasoo muuqday shirka jaraa’id ee lagu soo bandhigayay Antoine Griezmann wuxuu ku sheegay:
“Waxaan dooneynaa inaan mar walba aragno shaxda ugu fiican ee kooxda, dhamaan ciyaartoyda ku sugan halkan waa inoo muhiim”.
“Laakiin waxaan ka ogaanay koox ahaan heerka Philippe Coutinho, waxaan sidoo kale ognahay waxtarkiisa iyo waxa uu sameyn karo, isagu wuu ka war qabaa sida ay kooxda u qadariso iyo tababare Ernesto Valverde”.
Inkastoo ay hadaladan kasoo yeereen Eric Abidal, hadana waxaa la fahansan yahay in hadii uu kooxda yimaado Neymar Jr inay soo dedejin karto ka tagista Philippe Coutinho ee garoonka Camp Nou, waxaana laga yaabaa in bixitaankiisa ay sabab u noqoto arrimo dhaqaale awgood.